မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥာဏသံဝရ၏ သက်တော်(၅၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် စည်ကားစ? - Yangon Media Group
တာချီလိတ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
မိုင်း ဖုန်းဆရာတော် သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ ဘဒ္ဒန္တဥာဏသံဝရ၏ (၅၆)နှစ်ပြည့် ဝိဇာတ မွေးနေ့ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ ပိုင်း)တာချီလိတ်မြို့နယ် မိုင်းဖုန်း(က) ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပါဆာကျေးရွာရှိ (မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကျောင်းတိုက်) လွမ်းလိန်းကျောင်းတိုက်၌ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ဆရာတော်ရဲ့ ဝိဇာတမွေးနေ့က နှစ်စဉ်ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ နှစ်က ဆရာတော်ရဲ့ သက်တော် (၅၆)နှစ်ပြည့် ဝိဇာတမွေးနေ့ပါ။ မွေးနေ့မှာ လာရောက်လည်ပတ် တဲ့ တပည့်ဒါယကာတွေများတော့ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်လောက်က စ တင်ပြီး ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရပါ တယ်။ ယခင်နှစ်ကလည်း တပည့် ဒါယကာသိန်းချီပြီး လာရောက် လည်ပတ်ကြတယ်”ဟု ပွဲစီစဉ်သူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ မွေးနေ့ပွဲသို့ မဲခေါင်မြစ်ကြောင်း မှတစ်ဆင့် မြန်မာ-ထိုင်း- လာအို-တရုတ်-ကမ္ဘောဒီးယား အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် မြန်မာပြည်အရပ်ရပ် မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများက လည်း လာရောက်လေ့ရှိသည်။ မွေးနေ့အား အမှီသဟဲပြု၍ ရိုးရာအဝတ်အထည်များ၊ လက် ဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ခရီးသွားလုပ် ငန်းများလည်း အစဉ်ပြေမှုရှိကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ”မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးမွေး နေ့ပွဲမှာ ရိုးရာအဝတ်အထည်တွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းချ ကြပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေလည်း အတော်အဆင်ပြေတာ တွေ့ရတယ်။ ရပ်ဝေးကလာတဲ့သူတွေအတွက်က တော့ ကျောင်းဝင်း၊ ကျောင်းပြင်အိပ် ဖို့အတွက်လည်း အားလုံးက စီစဉ် ထားတော့ အဆင်ပြေကြပါတယ်”ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် လည်း သက်သတ်လွတ်ထမင်း ဟင်းများ၊ စတုဒိသာများလှူဒါန်း ကြရန်၊ အမှိုက်များကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြရန်၊ ကျောင်းတိုက်ပရိ ဝုဏ်အတွင်း သဲပုံစေတီများတွင် စိုက်ထိုးပူဇော်ကြသည့် တံခွန်ကုက္ကား အလံများ ရောင်းချခြင်းမပြုကြရန် ဆရာတော်က မိန့်ကြားထားသည်။ မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ Óဏသံဝရ၏ သက်တော်(၅၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့သည် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်တွင် ကျရောက် ပြီး ဝိဇာတမွေးနေ့တရားပွဲကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၅ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် သေနတ်သံ၊ ဗုံးသံနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများ ခံခဲ့ရသည်ကို သင်ခန်းစ??